प्रेरण एनीलिaling्ग प्रक्रिया - इन्डक्शन एनीलिaling प्रयोग किन
प्रेरण एनीलिaling प्रक्रिया
HLQ प्रेरण मा एक नेता हो प्रेरण तताउने सेवाहरू ईन्डक्शन एनीलि including् सहित। इन्डक्शन एनीयलिंगले धातु सामग्री गुणहरूको सटीक र विश्वसनीय नियन्त्रण सक्षम गर्दछ। ईन्डेक्शन एनीलिaling्ग मुख्यत: नरम र तनाव-राहत एनेलिaling्गको लागि प्रयोग गरिन्छ, पारम्परिक विधिहरूमा अत्यधिक लाभ प्रदान गर्दछ। इन्डक्शन एनीनेलिंगले उज्यालो एननेलिalingको समयमा अशुद्धियोंको थर्मल हटाउन सक्षम गर्दछ। इन्डक्शन एनीलिंग मुख्यत: नरम एनीलिaling्ग र तनाव-राहत एनेलिaling्गमा प्रयोग हुन्छ र यसले पारम्परिक विधिहरूमा ठूलो फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।
प्रेरणा Annealing यो एक धातु गर्मी उपचार हो जसमा एक धातु सामग्री विस्तारित समयको लागि माथिल्लो तापक्रममा पर्दछ र त्यसपछि बिस्तारै चिसो हुन्छ। एनीलिaling्ग ठूलो मात्रामा प्रेरित माइक्रो स्ट्रक्चरल परिवर्तनहरू द्वारा विशेषता गरिन्छ जुन अन्ततः सामग्रीको मेकानिकल गुणहरू बदल्नको लागि जिम्मेवार हुन्छ। यस प्रक्रियाको अन्तिम लक्ष्य धातुको कठोरतालाई कम गर्नु र यसको ड्युटिलिटी सुधार गर्नु हो।
एनीलिaling्ग सेवाहरूले विशेष रूपमा सामग्रीलाई यसको नरम सम्भावित बिन्दुमा ल्याउने प्रक्रियालाई उल्लेख गर्दछ। हाम्रो टेम्परिंग प्रक्रिया मेटल नरम गर्दछ तर पूर्ण हदसम्म सम्भव छैन। स्वभाव को डिग्री सामग्री मा निर्भर गर्दछ, अधिकतम तापमान पुग्यो र शान्त डाउन समय को लम्बाई। प्रक्रिया वा तनाव राहत annealing चिसो काम को प्रभावहरु लाई अस्वीकार गर्न प्रयोग गरीन्छ; त्यो हो, नरम गर्न र अघिल्लो तनाव-कठोर धातुको ductivity वृद्धि गर्न। आन्तरिक तनाव प्लास्टिक विरूपण प्रक्रिया जस्तै मसिनिंग वा ग्राइन्डिंग, वेल्डिंग वा कास्टिंग प्रक्रियामा गैर-समान कूलि,, वा चरण परिवर्तनको रूपमा विकसित हुन सक्छ। विकृति र वार्पिंग हुन सक्छ यदि आन्तरिक तनाव हटाइएको छैन। त्यहाँको सिफारिश गरिएको तापमानमा तातो हुँदा, लामो समय सम्म आयोजित गरिएको, र बिस्तारै कोठाको तापक्रममा ठण्डा हुँदा एनीनेलिंगले यी तनावहरू हटाउँदछ।
किन annealing प्रयोग?
आधुनिक इन्डक्शन हिटिंगले अन्य तताउने विधिहरूमा धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ र सामान्यतया एनिनेल अनुप्रयोगहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रेरण को माध्यम बाट ताप को एक न्यूनतम समय मा भरपर्दो, दोहोरिने योग्य, गैर संपर्क र ऊर्जा कुशल गर्मी प्रदान गर्दछ। ठोस राज्य प्रणाली विशिष्ट धातु सहिष्णुता भित्र धेरै साना क्षेत्रहरु हीट गर्न सक्षम छन्, व्यक्तिगत धातु विशेषताहरु अवरोध नगरी। प्रेरण या त सतह को लागि वा हीटिंग को माध्यम बाट प्रयोग गर्न सकिन्छ; केस एनीनेलिंग समय, तापक्रम र सामग्रीका विशेषताहरूमा निर्भर गर्दछ।
प्रेरण एनीलिaling्ग एक सामान्यीकृत शब्द हो जुन धातुलाई निर्दिष्ट तापक्रममा तताउने र त्यसपछी दरमा कूलि thatको रूपमा परिष्कृत माइक्रोस्ट्रक्चर उत्पादन गर्दछ। प्रेरणको प्रयोग गरी धातुलाई द्रुत तापक्रम तापक्रम तान्न सकिन्छ नियन्त्रणमा दोहोरिएको चक्रलाई धातु लक्षसँग सम्पर्क नगरीकन वा वरपरको वातावरणलाई तापीएको बिना। लौह धातुहरूका लागि शीतलन भटहरू खुला खुला हावामा हुन्छ जसको परिणामस्वरूप मोती बनाउँछ। अलौह धातुहरू, यस्तो तामा वा पीतल, पानीमा श्वास गरेर छिटो चिसो गर्न सकिन्छ। नतीजा सामग्री "नरम" र अधिक सजीलो बनाउन आवाश्यक आकारमा।
प्रेरणा Annealing सामान्यतया तार प्रसंस्करण, सटीक उपकरण बनाउने, र ट्यूब गठन अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। प्रेरण एनीलिंगका लागि विशिष्ट सामग्रीहरूमा एल्युमिनियम, कार्बन स्टील, र कार्बाइड समावेश छ। प्रेरण एनीलिaling्गका केहि फाइदाहरू हुन्: मागमा पावर; तीव्र ताप चक्र; ठूलो तताउने क्षेत्र (जस्तै ओभन) को लागी निरन्तर उर्जाको उन्मूलन; कम बचत प्रयोगको कारण लागत बचत; धातुको सीधा तताउने र परिवेशको हवाइले संवहन प्रक्रियामा जस्तै; खुला फ्लेम विधिहरू भन्दा सुरक्षित प्रक्रिया; एक तापक्रम र एक समान ताप दिनको लागि अपरेसन दक्षतामा निर्भर नभएको लागि तापक्रम प्रक्रिया नियन्त्रण।
इन्डक्शन एनीलिंगका लागि HLQ प्रेरणा किन छनौट गर्नुहोस्?
हामी चीन मा कार्यालयहरु संग प्रेरण हीटिंग मा उद्योग नेताहरु छन्।
प्रेरणा एनेलिंग इन्डक्शन हीटर द्वारा एक प्रकारको तातो उपचार हो, एक निर्दिष्ट तापमानमा धातुलाई तातो र एक रेटमा कूलि that गर्दा एक परिष्कृत माइक्रोस्ट्रक्चर उत्पादन गर्दछ। प्रेरण तताउने को उपयोग गरेर, धातु द्रुत तापक्रम तापक्रम तापक्रम तौल गर्न सकिन्छ नियन्त्रित दोहोरिएको चक्रलाई धातु लक्ष बिना सम्पर्क नगरीकन, सामग्री सामान्यतया खुला हावामा चिस्याइन्छ। नतीजा सामग्री "नरम" र अधिक सजीलो बनाउन आवाश्यक आकारमा।
प्रेरण तताउने को साथ annealing को लाभ:
१. उच्च उत्पादन दर
२. कम तताउने क्षेत्र र निरन्तर बिजुली चाहिन्छ (जस्तै ओभन)
Increased. बढेको उत्पादन र कम श्रम लागतका कारण लागत बचत गर्नुहोस्
Heating. ताप गर्ने समय र तापक्रम नियन्त्रण गर्न सजिलो
किनकि हामी इन्डक्शन हीटिंगमा विशेषज्ञता राख्छौं, हाम्रा ग्राहकहरूले धेरै उद्योगहरूमा एकीकृत इन्डक्शन एनीलिंग समाधानबाट फाइदा लिन्छन्।
हाम्रो ग्राहकहरु अत्यधिक इन्भेन्टरी र अंश प्रेरण annealing को उपयोग को माध्यम बाट ह्यान्डलिंग को बेवास्ता, जो न्यूनतम अपशिष्ट र एक कम लागत मा सुधार परिणाम मा परिणाम। हामी शीर्ष-टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी, उपकरण, र प्रक्रिया उपज इकाईहरू छन् कि उच्चतम गुणवत्ता मापदण्ड पूरा।